अनलाइन जुवाः करोडौँको सट्टेबाजी, दुई सय रुपैयाँ धरौटी ! :: PahiloPost
अनलाइन जुवाः करोडौँको सट्टेबाजी, दुई सय रुपैयाँ धरौटी !
5th June 2018, 09:03 am | २२ जेठ २०७५
काठमाडौँ: अनलाइन जुवा खेलाएको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ परेका छ जना धरौटीमा छुटेका छन्। पक्राउ परेकामध्ये पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी अन्जन केसी दुई सय रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका हुन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले उनी छुटेका हुन्।
धरौटी बुझाएर उनीहरु छुटेको महानगरीय प्रहरी परिसरका डिएसपी मोहनकुमार श्रेष्ठले बताए।
प्रहरीका अनुसार सट्टेबाजीमा मुख्य भूमिका गौरव तिवारीको छ। उनीहरुले ७ करोड १४ लाखको बाजी खेलाएको प्रहरी बताउँछ। उनीहरुलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जुवा ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो।
तिवारी १२ डी हलका सञ्चालकसमेत हुन्। उनले लण्डनको एउटा साइटमा २४ वटा अकाउन्ट खोलेर त्यसैमार्फत् सट्टेबाजी गराएका थिए।
अन्जन केसी भने उनका ललितपुर एजेन्ट थिए।
अनलाइन जुवाः करोडौँको सट्टेबाजी, दुई सय रुपैयाँ धरौटी ! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।